Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Macau GT Cup tohanan'ny Sands China Title
Sands China Ltd. no mpanohana ny lohatenin'ny Sands China Macau GT Cup tamin'ity faran'ny herinandro ity, izay nandray ireo mpamily fiara avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hifaninana amin'ny hetsika hazakazaka fiara sonia ao an-tanàna, ny Grand Prix Macau.
Ny fanohanan'i Sands China ny hazakazaka dia ampahany amin'ny fanohanana mitohy ataon'ny orinasa amin'ny fampandrosoana ara-panatanjahantena sy fizahan-tany ara-panatanjahantena ao Macao, ho fampiroboroboana ny hetsika fizahantany+ ataon'ny governemanta Macao. Izy io koa dia manohana ny fanoloran-tenan'ny governemanta amin'ny fihazonana ny Grand Prix faha-68 ao amin'ny Macau na dia eo aza ny fanamby mitohy amin'ny areti-mifindra, amin'ny ezaka mba hampidirana angovo tsara kokoa amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny hetsika malaza manerana ny tanàna.
Notarihin'ny filohan'ny orinasa Dr. Wilfred Wong ireo mpanatanteraka sy mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Sands China Ltd. mba hijery ireo fiara misy marika famantarana Sands China eo amin'ny sehatra fanombohana sy hanatrika ny lanonana fanolorana loka taorian'ny hazakazaka ny alahady.
Ireo mpamily nisolo tena an'i Macao, Hong Kong, ary ny tanibe dia nifaninana tamin'ny Sands China Macau GT Cup, nifaninana tamin'ny fiarandalamby ambony indrindra avy amin'ny Lamborghini, Aston Martin, Mercedes, Porsche, Audi, ary BMW.
Sands China dia manantena fa ny hazakazaka dia mety ho fomba iray hanohanana ireo mpankafy fanatanjahantena eo an-toerana sy hampiroboroboana ny fifanakalozam-bola hanampiana amin'ny fanandratana ny fifaninanana iraisam-pirenena.
Sands China Ltd. dia manana tantara lava be amin'ny fanohanana ny fivoaran'ny hetsika ara-panatanjahantena ao Macao. Ny orinasa dia nanohana, nampiantrano, na nikarakara hetsika ara-panatanjahantena maro nandritra ny taona maro, anisan'izany ny basikety, baolina kitra, golf, ady totohondry, hazakazaka sy ny maro hafa. Matetika ny Sands China no mampiasa ny fahafahana atolotr'ireny fifaninanana sy lalao fampirantiana ireny mba hampiantranoana hetsika fanampiny toy ny toeram-pitsaboana ho an'ny tanora sy hetsika mifantoka amin'ny fiaraha-monina mba hifandraisana bebe kokoa amin'ny vondrom-piarahamonina sy hanamafisana ny fiantraikan'ny hetsika ho an'ny tanàna. Tsy nihozongozona ny orinasa tamin'ny fanohanany hetsika ara-panatanjahantena any Macao, na dia eo aza ny fahasahiranana ateraky ny tontolon'ny areti-mifindra.